(rnn) (digo yara) (digo yara) (dd)
(D) (la soco) (la soco) (xanh lam)
Copper wuxuu ku falceliyaa xalka milixda ee FeCl3
koloriin barium bir (ii) koloriin barium sulfate
(trung) (wax badan) (la soco) (trung)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta BaCl2 + FESO4 → FeCl2 + BASO4
Kalorium chloride waxay ku falcelisaa birta II sulphate
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada BaCl2 + FESO4 → FeCl2 + BASO4
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee FeCl2 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh FeCl2 (iron(ii) chloride) alaab ahaan?
birta koloriin bir ah bir (ii) koloriin bir (ii) koloriin
(sax ah) (la soco) (la soco) (la soco)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Fe + 2FeCl3 → 2FeCl2 + FeCl2
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa FeCl2 (iron(ii) chloride) iyo FeCl2 (iron(ii) chloride)?
Birtu waxay la falgashaa FeCl3
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Fe + 2FeCl3 → 2FeCl2 + FeCl2
zinc koloriin bir ah bir (ii) koloriin chloride zinc
(Trang BAC) (la soco) (la soco) (trung)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Zn + FeCl3 → FeCl2 + ZnCl2
Waa maxay xaalada falcelinta ee Zn (zinc) uu kaga falceliyo FeCl3 (kloriinta birta)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa FeCl2 (iron(ii) chloride) iyo ZnCl2 (zinc chloride)?
Zn wuxuu la falgalayaa FeCl3
Dhacdada ka dib Zn (zinc) waxay la falgashaa FeCl3 (chloride iron)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Zn + FeCl3 → FeCl2 + ZnCl2
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee ZnCl2 (chloride iron)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh ZnCl2 (zinc chloride) alaab ahaan?